Iyini isitifiketi se-AWS? Uhlu lwe-AWS Training Courses | Ukuqeqeshwa kwe-ITS
23 -Feb 2017
Kuyini isitifiketi se-AWS?
Uhlu lwe-AWS Training Courses & Certifications
I-AWS - I-Solutions Architect:
I-AWS Ukunikeza izitifiketi zezinga elihlanganisiwe & Izifundo zokuqeqesha ze-Architects Solutions, i-SysOps Abaphathi & Abathuthukisi. I-innovative Technology Solutions inikeza izitifiketi zezinga eliphezulu lobuchwepheshe bezixazululo zezixazululo ze-Solutions Architects & DevOps egameni le-AWS.
Inkambo ye-AWS Business Essentials ihloselwe ukukusiza ukuthi uqonde kangcono ifu le-AWS, ngenhloso ukuthi ulungele kangcono ukuhlola nokuthuthukisa isu lokukhetha ifu. Inkambo ikhuluma ngezinto eziyisisekelo ze-AWS kanye nokuphakama kwefu lokucubungula ibhizinisi lakho, kuhlanganise nokuphepha, nezinzuzo ezihlobene nemali. Ihlinzeka izinhlelo zokuhlenga ifu elivuthiwe, libhekelela ukuguqula i-IT yenhlangano kanye nezingxenye zokuthola, nokubuyekeza ukuthi izinsiza ze-AWS zingashintsha kanjani ukuphathwa kwezindleko ze-IT. #AWS Training
I-AWS Certified Solutions Architect - Ukuhlolwa okuhlanganyelwe kuhlongozwa kubantu abanolwazi lokuklama izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswayo kanye nezinhlelo ezisekelweni le-AWS. Imibuzo yokuhlola okufanele uyiqonde ngoba lokhu kuhlolwa kuhlanganisa: Ukuklama nokuthumela izinhlelo ezivumelanisiwe, ezifinyeleleka kakhulu, kanye nezinkinga zokubekezelela amaphutha ku-AWS. #AWS Certification
Ukwakhiwa kwe-AWS kuhlanganisa izinto eziyisisekelo zokwakha ingqalasizinda ye-IT ku-AWS. Le nkambo ihloselwe ukukhombisa abalungiseleli bokuhlela indlela yokuqhubekisela phambili ukusetshenziswa kwe-AWS Cloud ngezinsizakalo zokuqonda ze-AWS nendlela lezi zinsizakalo ezihambelana ngayo namalungiselelo asefu. Lelifundo likhuthaza imikhuba emihle ye-AWS yamafu kanye nezibonelo ezihleliwe zezinhlelo zokusiza ukusizwa ngokucophelela kucabangela inqubo yokwakha amalungiselelo ahle we-IT ku-AWS. Uphenyo olunembile kulo lonke inkambo lubonisa ukuthi amanye amaklayenti a-AWS asho kanjani izizinda zabo kanye namasu kanye nezinsizakalo abazenzayo. #AWS Izifundo Zokuqeqesha
Kungani ukuqinisekiswa kwe-AWS Kubalulekile? Umholo we-AWS oqinisekisiwe wonjiniyela ku-Amadola